Maamulka degmada Kurtunwaarreey oo dadaal ugu jira dib u soo nooleeynta adeegyadii bulshada |
Maamulka degmada Kurtunwaarreey oo dadaal ugu jira dib u soo nooleeynta adeegyadii bulshada
Maamulka degmada Kurtunwaareey ee gobolka Sh/Hoose ayaa wada qorshe uu dib ugu soo nooleeynayo adeegyadii bulshada.
Gudoomiyaha degmadaasi C/raxman Sabtow Daahir oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in dadka ku nool degmadaasi aysan heysan adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa nolosha bulshada, sida Cisbitaal, dugsiyo waxbarasho, suuqyo ganacsi iyo wadooyinka oo aad u burbursan.
Wuxuu tilmaamay in maamulkiisu uu dadaal ballaaran ugu jiro dib usoo nooleeynta adeegyada bulshada, isagoo ka dalbaday dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed iney gacan ka geystaan dib usoo nooleeynta adeegyadii bulshada ee degmadaasi, sida caafimaadka, waxbarashada, iyo dayactirka waddooyinka.
“Degmada Cisbital laha mana jirto MCH-yo iyo meel ay ku dhalaan haweenka , waxaanse rajeynayaa in maalmaha soo socda uu maamulku dib u howlgeliyo cisbitaalka guud ee degmadaasi iyo adeegyada kale ee bulshada aysan ka maarmin” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Kurtun waareey, C/raxman Sabtow Daahir.
Dhanka kale gudoomiyaha ayaa xusay in dadka ku nool degmadaasi ay u badanyihiin xoola dhaqato iyo Beeraleey, isagoo intaa raaciyay ineysan dadku heysan dawada xoolaha iyo tan beeraha, wuxuuna ka dalbaday wasaaradaha caafimaadka iyo beeraha iney arrimahaasi wax ka qabtaan.
Degmada Kurtun waareey ayaa ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyay ee laga xoreeyay maleeshiyaadka Shabaab.